မီးဖို၌အိုး၌ multivarka ၌မုယောစပါးဂျုံယာဂု။ တစ်အရသာမုယောစပါးဂျုံယာဂုချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
မုယောစပါးဂျုံယာဂု - ရိုးရှင်းသောဟင်းလျာများချက်ပြုတ်၏မူလအိုင်ဒီယာ၏ 8
ဒီအစားအစာအတော်များများချစ်ခြင်းမေတ္တာမဟုတ်ဘူး။ တစ်စုံတစ်ဦးကထိုသို့စစ်တပ်တစ်ထမင်းစားခန်းဧရိယာနှင့်အတူတစ်ယောက်ယောက်ကိုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ထိုအခါအကြောင်းပြချက်ဤလူရိုးရှင်းစွာမုယောစပါးဂျုံယာဂုတစ်ခါတစ်ရံအရမ်းအရသာရှိတဲ့အထဲကလှည့်ကိုမသိကြသာဖြစ်ပါတယ်။ ဟင်းချက်အသားနှင့်မှိုနှင့်နို့နှင့်အတူရှိနိုင်ပါသည်။ ရှေးခယျြစရာတစျခုစီ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လမ်းအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ထဲကအကောင်းဆုံးကိုအောက်တွင်တင်ဆက်ထားပါသည်။
မုယောစပါးကိုစနစ်တကျကိုပြင်ဆင်ပါကအလွန် appetizing ထုတ်ကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ်။ အတော်များများသောကြောင့်ကြိုက်နှစ်သက်လွန်းခက်ယုံပေမယ့်တချို့လျှို့ဝှက်ချက်များကိုရှိပါတယ်, ဤရှောင်ကြဉ်နိုင်ပါဘူး။ သင်တို့သည်ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာပါကချက်ပြုတ်နည်းများ, ရိုးရှင်းပြီးအရသာရှိတဲ့ရယူထားသောဦးမည်ဖြစ်သောမုယောစပါးဂျုံယာဂု:
မုယောစပါးကိုပထမဦးဆုံး3အနည်းဆုံးတစ်နာရီအဘို့အစိမ်ရန်လိုအပ်သောဖြစ်တယ်, ညအချိန်တွင်ပင်ကောင်း၏။
ဟင်းချက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ဦးသည်အိုးကင်း, အထူ stenochku နှင့်အတူအိုးသုံးစွဲဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
အသားနှင့်အတူမုယောစပါးဂျုံယာဂု - စာရွက်
အသားနှင့်အတူမုယောစပါးဂျုံယာဂု - ကသာအလွန်ကျေနပ်စရာဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်လည်းမယုံနိုင်လောက်အောင်အရသာအစားအစာ။ အဲဒီအစား, သငျသညျဝက်သားနဲ့အမဲသားကိုသုံးနိုင်သည်နှင့်ကြက်သားသာအမဲသား၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ချက်ပြုတ်အချိန်တိုးမြှင့်မည်ကိုအကောင့်သို့ယူသင့်ပါတယ်။4ဝေမျှဖြန့်ချိထုတ်ကုန်များကပြောသည်အရေအတွက်မှသည်နှင့်အချိန်ခန့်2နာရီယူပါ။ အဆိုပါပန်းကန််ထမ်းဆောင်တဲ့အခါမှာထုအစိမ်းရောင် pritrusit ကုန်တယ်နိုင်ပါသည်။
ဝက်သား - 500 ဂရမ်;
မုယောစပါး - 1 ခွက်ကို;
ကြက်သွန် - 1 pc; ။
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရွက် -2PCs ။
ရေကိုလောင်းနှင့်ညဉ့်အဘို့ချန်ခြွင်း, grit လျှော်ကြ၏။
3 နှင့်အနိမ့်အပူမှာ tomyat နာရီမှာ about: ထိုအခါ 1 အချိုးအတွက်လတ်ဆတ်တဲ့ရေကိုလောင်း။
ဝက်သားရွှေသည်အထိသူတို့ကိုကြော်ဆေးကြောခြင်းနှင့် Cube သို့ခုတ်ဖြတ်။
ကုန်တယ်ကြက်သွန်, မုန်လာဥနီပြန့်နှံ့, ဆားနှင့်အချို့ပိုပြီးချက်ပြုတ်။
ရေနှင့်အတူဒယ်အိုး contents တွေကိုအဖုံးဖုံးနဲ့ 1 နာရီမပြတ်မီးမငြိမ်း။
အဆိုပါပါဝင်ပစ္စည်းများရောထွေး, အပြည့်အဝချက်ပြုတ်သည်အထိနံ့သာမျိုးနှင့် tantalized ထည့်ပါ။
စွပ်ပြုတ်အသားနှင့်အတူမုယောစပါးဂျုံယာဂု - စာရွက်
စွပ်ပြုတ်အသားနှင့်အတူမုယောစပါးဂျုံယာဂု - အမဲသားကိုကိုယ့်ကိုကိုယ်ထွက်ထားရန်အချိန်မရှိဘူးအခါကြီးမြတ်ချစ်ဘွယ်သောလက္ခဏာမုန့်ညက်။ စွပ်ပြုတ်မဆိုယူနိုင်သည် - မထိုက်မတန်နှင့်ကြက်သားနှင့်အမဲသားများနှင့်ဝက်သား။ အဓိကအရာကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးမြင့်၏ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်မုန့်ညက်တစ်အိုးကင်းထဲမှာအပြင်မှာချက်ပြုတ်နိုင်ပါတယ်။ ထို့နောက်စွပ်ပြုတ်အသားနှင့်အတူပုလဲမုယောဆန်ဂျုံယာဂုနှင့်နေဆဲမီးခိုးအနံ့နှငျ့သငျတဲ့အရသာအရသာရ။
မုယောစပါး - 300 ဂရမ်;
မုန္လာဥနီ - 100 ဂရမ်;
ရေ -4ခွက်;
စွပ်ပြုတ် - 1 ဘဏ်;
အမြီးကိုဆေးကြောနှင့်3chasa အတွက်စိမ်။
ရေ, လောကကိုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားခြင်းနှင့်ငြီးငွေ့ဝက်နာရီနှင့်အတူဝက်ချက်ပြုတ် grit ချထားပါ။
အသားထုတ်ကုန်ပိတ်ပင်ထားပေမယ့်နေဆဲချစ်ဘွယ်သောလက္ခဏာနှင့်အရသာတစ်ခုခုချင်ကြသောအခါဥပုသ်အဘို့ကြီးသော, - မှိုနှင့်အတူမုယောစပါးဂျုံယာဂု။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အကောင်းဆုံးအစားထိုးခန္ဓာကိုယ်လိုအပ်ပါတယ်သူတို့က, သိပ်ပရိုတိန်းသောကွောငျ့, မှိုလုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအစားမှိုဒဏ်ငွေဖြစ်နှင့်အခြားမှိုသငျ့သညျ။ လျှောက်ထားတဲ့အခါမှာသင် pudding ကုန်တယ်ဇီယာစေ့သို့မဟုတ် parsley pritrusit နိုင်ပါတယ်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဟင်းရည် - 400 ml ကို;
-မုန်လာဉဝါညွှတ် - 1 pc; ။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ - 30 ml ကို;
မှို - 300 ဂရမ်;
မုယောစပါး - 200 ဂရမ်;
Sautéကြက်သွန်နီ, 10 မိနစ်လိုက်သည်ကိုမှိုချပ်နဲ့ကြော်ထည့်ပါ။
အဆိုပါဆေးကြော grit Add နှိုးဆော်နှင့်မြည်းစမ်းဖို့အရည်ကိုဆားနှင့်ငရုတ်ကောင်းသွန်းလောင်း။
ပွက်ပွက်ဆူနေသောပြီးနောက်, အပူနှင့်အဆင်သင့်သည်အထိအဖုံး tomyat လျှော့ချပေးပါတယ်။
မုယောစပါးဂျုံယာဂုအောက်တွင်ပြသသောစာရွက်, ကြက်သားနှင့်အတူပြင်ဆင်ထားသည်။ မထိုက်မတန်ကောင်းကောင်းနှင့်ပေါင်များနှင့်အောက်ပိုင်းခြေထောက် - မယ့်အစားကကြက်သားအသေကောင်ကိုတခြားပိုပြီးဖက်တီးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူနိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းကို 1 နာရီဖြစ်သဖြင့်, ရလဒ်အပြီးအပိုင်သင့်ရဲ့ဆာလောင်မွတ်သိပ်ကျေနပ်နိုင်ကြောင်းအရသာအစားအစာအကြောင်းကို 3-4 စားသုံးခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်ချက်ပြုတ်ဘို့လိုအပ်စုစုပေါင်းအချိန်။
ကြက်သား - 400 ဂရမ်;
ကြက်သားသို့မဟုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဟင်းရည် - 500 ml ကို;
ကြက်သွန်, မုန်လာဥနီ - 1 pc ။
အလင်း rosy သည်အထိ Cube, ဆား, pritrushivayut နံ့သာမျိုးနှင့်ကြော်ထဲသို့လွှာညှပ်။
ထိုအခါထိပ်ထားအညီအမျှပြုမိသည်အထိအနိမ့်အပူပေါ်ကြက်သားသို့မဟုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဟင်းရည်နှင့် tomyat လောင်း grit လျှော်ကြ၏။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အတူမုယောစပါးဂျုံယာဂု - ထိုအရသာဟင်းသီးဟင်းရွက်ဟင်းလျာများ၏အခြားဗားရှင်း။ ရရှိနိုင်သောအစိတ်အပိုင်းများအားဖြင့်ပိုမိုလွယ်ကူစွာမဆိုအေးခဲဟင်းသီးဟင်းရွက်ရောအနှောကို add နိုင်ပါတယ်။ မုယောစပါးဒါခေါ်အများအပြားဘိုဟိုက်ဒရိတ်များပါဝင်သည်။ ထို့ကြောင့်ပင်အသားထုတ်ကုန်မပါဘဲချစ်ဘွယ်သောလက္ခဏာပန်းကန်ထဲကအလှည့်။ ထိုအတက်မြိန်နှင့်အရသာတိုးတက်လာဖို့, သင်သည်သင်၏အကြိုက်ဆုံးနံ့သာမျိုးကိုသုံးနိုင်သည်။
မုယောစပါး - 1.5 ခွက်;
200 ဂရမ် luk-;
မုန္လာဥနီ - 200 ဂရမ်;
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဟင်းရည် - 4.5 ခွက်;
အဆိုပါ grit ဟင်းရည်ကိုဆေးကြောခြင်းနှင့်အနိမ့်အပူမှာတစ်နာရီ tomyat သွန်းလောင်းလေ၏။
အလင်း rosy သည်အထိဟင်းသီးဟင်းရွက်များဖြတ်သွားကုန်တယ်။
အသားနှင့်အတူမုယောစပါးဂျုံယာဂု multivarka အတွက် - တစ် pilaf တူသောအရာဖွစျသညျ။ Multivarka ယေဘုယျအားဖြင့်ပြုလုပ်အတွက်ဟင်းလျာများပန်းကန်မှာအစဉ်အလာလမ်းအတွက်ချက်ပြုတ်လျက်ရှိသောသူတို့ကိုထက်အရသာပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ကြောင်းတကယ်တော့လူသိများ။ မုယောစပါးဂျုံယာဂု - အဘယ်သူမျှမချွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကောင်းစွာပျော့ပြုတ်နှင့်အလွန်ပျော့ပျောင်းလှည့်ထားသည်။ သင်တစ်ဦးဟင်းသီးဟင်းရွက်ဟင်းရည်သို့မဟုတ်ရှိပါက အမဲသားဟင်းရည် , သင်လုံခြုံစွာမယ့်အစားရေကသူတို့ကိုသုံးနိုငျပင် tastier ရ။
ပျော့ဖတ်ဝက်သား - 400 ဂရမ်;
-မုန်လာဉဝါညွှတ် -2PCs; ။
မုယောစပါး -2multistakana;
ရေ -5multistakanov;
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ - 100 ml ကို;
pilaf အဘို့အ seasoning;
ကြက်သွန်ဖြူ -2လေးညှင်းပွင့;
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရွက် - 1 pc ။
တစ်နာရီ၏လေးပုံတပုံ ပြင်ဆင်. , multivarochnuyu စွမ်းရည်နှင့် "မုန့်ဖုတ်" mode မှာဇာတိအားဖြင့်ပြန့်နှံ့တဖဲ့ခုတ်ဖြတ်။
အခြား 10 မိနစ်ပြင်ဆင်နေတစ်ချိန်တည်းမှာဖျက်စီးရမဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ, နံ့သာများနှင့်လောကကိုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားထားပါ။
သွန်းလောင်း-ကိုလျှော် grit ။
"pilaf" mode ကိုအတွက်အချက်ပြမှုမှပြင်ဆင်ထားသည်။
အိုးကနေအစားအသောက် - သူကအမြဲအရသာပါပဲ။ ထို့ကြောင့်ပြင်ဆင်ထားခြင်းနှင့်အာလူး, ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်ပိုပြီး appetizing ထွက်။ မီးဖို၌အသားနှင့်အတူမုယောစပါးဂျုံယာဂု, လွန်းသောကြောင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အထဲကပြန်သွားလေ၏။ ဒါဟာသင်အမဲသားကိုသုံးပါလျှင်, ပထမနှစ်ဝက်သည်အထိသိပ်ပြီးစိုးရိမ်မနေဘူးသင့်တယ်, သာထို့နောက်သူကအမြဲပိုရှည်များအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သောကြောင့်, အိုး၌သွင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပေသည်။
အသား - 700 ဂရမ်;
မုယောစပါး - 400 ဂရမ်;
မုန်လာဥနီ -2PCs; ။
ဟင်းရည် - 1.5 လီတာ;
ရေနံ 20 ml ကို rastitelnoe-;
ကုန်တယ်ဟင်းသီးဟင်းရွက် Add နှင့်အခြား5မိနစ်ချက်ပြုတ်။
အားလုံးအရည်ထိပ်၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 2.1 စင်တီမီတာသို့ရောက်ရှိမဟုတ်ဖုံးအုပ်ထားပါ။
ကွန်တိန်နာ lids ပိတ်ပြီးနာရီဝက်အဘို့ 190 ဒီဂရီမှာသိုထား၏။
ထို့နောက် 170 ဒီဂရီအပူချိန်ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်မုယောစပါးဂျုံယာဂုအခြားမိနစ် 20 အားလြော့ကြကုန်အံ့။
မုယောစပါး နို့ပေါ်ရွှေဖရုံသီးနှင့်အတူဂျုံယာဂု - ကအလွန်အရသာရှိတဲ့, ဒါပေမယ့်လည်းနှစ်ထပ်ကွမ်းအသုံးဝင်သည်။ ရုံမီးရှို့မဟုတ်ကြောင်းနိုင်အောင်နို့နှင့်အတူရံဖန်ရံခါမုယောစပါးဂျုံယာဂု, နှိုးဆော်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတာကိုသတိရ။ လယ်ယာ multivarka ရှိပါကရုံဘာမှမီးရှို့မည်မရှိသောကွောငျ့, သို့ဖြစ်လျှင်ဤအစားအစာ, အထဲတွင်ချက်ပြုတ်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ အရသာအဘို့အချော pudding အတွက်အနည်းငယ် vanilla သို့မဟုတ်သစ်ကြံပိုးထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
မုယောစပါး -4tbsp ။ ဇွန်း,
ကုန်ကြမ်းဖရုံသီး - 150 ဂရမ်;
နို့ - 500 ml ကို;
သဲသကြား -2tbsp ။ ဇွန်း,
ဒယ်အိုးရေ 200 ml ကိုသွန်းလောင်းဖရုံသီး drop သေးငယ်တဲ့ Cube သို့ဖြတ်, ဆား, သကြားနဲ့ 10 မိနစ်ပျမ်းမျှတစ်ဦးမီးငြိမ်းအေးနေပါတယ်။
ထို့နောက်အပူထဲကနေဖယ်ရှားဂရုတစိုက် tolkushkoy ပွတ်။
ယခင်ကစိမ်စီရီရယ်ငါသွန်းလောင်း, နို့နှင့်အလတ်စားအပူအရသာမုယောစပါးဂျုံယာဂု 50 မိနစ်အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်ကျော်သွန်းလောင်း။
ကြက်သား giblets နှင့်အတူဟင်းချို
သောက်သည်ကြက်သားနှင့်အတူ lavash ကနေလိပ်
ကြော်ကိတ်မုန့် - စာရွက်
ကဏန်းတုတ်နှင့်အတူ "Raffaello" - အစားစကားလုံးများကိုထောင်ပေါင်းများစွာ၏
မဲနယ် - ကဘာလဲ?
အဘယ်ကြောင့်ကလေးတစ်ဦးဦးခေါင်းအပေါ်သူ့ကိုယ်သူ beats သနည်း?
သကြားနှင့်အတူ mashed Cranberries - စာရွက်
သားအိမ်သည်လည်းကျယ်ဝန်း၏ - အကြောင်းရင်းများ